Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Turkiga xayiraad kuma soo rogi doono dalxiisayaasha Ruushka
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ruwanda News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga • Wararka kala duwan
Turkiga xayiraad kuma soo rogi doono dalxiisayaasha Ruushka ee ay ugu baaqeen Ururka Cudurada faafa ee Turkiga
Mas'uuliyiinta Turkigu ma qorshaynayaan inay soo bandhigaan ama adkeeyaan xeerarka fayadhowrka ee dalxiisayaasha Ruushka ee u safraya jamhuuriyadda fasaxa.
Cudur -u -qaadka Turkiga wuxuu ku baaqayaa in la xaddido booqdayaasha ka imaanaya Ruushka.
Turkigu ma qorsheynayo inuu adkeeyo xayiraadaha safarka.
Turkiga waxay soo bandhigtay "Shahaadada dalxiiska ee aaminka ah".
Toddobaadka dhammaadkiisa, Mehmet Ceyhan, oo ah guddoomiyaha Ururka Cudurada faafa ee Turkiga, ayaa ku baaqay “tallaabooyin adag oo la xiriira dalxiisayaasha Ruushka” ee fasaxa u yimaada Turkiga, “haddii kale suurtagal ma noqon doonto in la joojiyo kororka cudurrada.”
Si kastaba ha ahaatee, Ceyhan ma cayimin sida saxda ah ee ay tahay in arrintan loo sameeyo iyo sababta tallaabooyinkan loogu dabaqi karo oo kaliya dalxiisayaasha ka yimaada Ruushka.
Sida laga soo xigtay safaaradda Turkiga ee Moscow, mas'uuliyiinta Turkigu ma qorshaynayaan inay soo bandhigaan ama adkeeyaan xeerarka fayadhowrka ee dalxiisayaasha Ruushka ee u safraya jamhuuriyadda fasaxa.
"Daryeelka rasmiga ah ee Turkiga iyo mas'uuliyiinta dalxiiska ma qorsheeyaan xannibaadyo ama adkeynta tallaabooyinka dalxiisayaasha Ruushka," ayaa lagu yiri howlgalka.
Safaaradda ayaa beenisay wararka sheegaya dhakhtarka cudurka caabuqa ee Turkiga Mehmet Ceyhan in Turkigu laga yaabo inuu adkeeyo xayiraadaha ka dhanka ah dalxiisayaasha Ruushka ee ku aaddan dhacdooyinka COVID-19 ee sii kordhaya ee dalka.
“Waxaan jecelahay inaan ogaano in hadalka uu soo saaray Mudane Ceyhan uu yahay fikirkiisa shaqsiyeed. Masuuliyiinta daryeelka caafimaadka iyo dalxiiska ee rasmiga ah ee Turkiga ma qorsheynayaan wax xayiraad ah ama adkeyn ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha Ruushka ah, ”ayaa lagu yiri howlgalka
"Turkey si guul leh ula tacaali doona caqabadaha inta lagu jiro masiibada, iyada oo ay ugu wacan tahay nidaam daryeel caafimaad oo horumarsan iyo tallaabooyin loo qaaday si habboon. Sidoo kale, waxay soo bandhigtay 'shahaadada dalxiiska oo nabdoon,' oo ay ku jiraan xeerar iyo tallaabooyin badbaado oo lagama maarmaan u ah dammaanad -qaadka joogitaanka nabdoon oo raaxo leh ee martida dalka, ”ayay safaaraddu raacisay.